ChimeraOS: Steam နှင့်ကွန်ပျူတာဂိမ်းများအတွက်စံပြ GNU / Linux Distro Linux မှ
ChimeraOS: Steam နှင့်ကွန်ပျူတာဂိမ်းများအတွက်စံပြ GNU / Linux Distro
Linux Post Install လုပ်ပါ | | ဖြန့်ဝေ, NOTICIAS
အချို့သော ကွန်ပျူတာနှင့်ဂိမ်းကစားသူများ များသောအားဖြင့်သူတို့ကအိပ်မက်မက်တယ် စုစည်းထားသောပလက်ဖောင်း ၎င်းသည်သူတို့၏ခေတ်သစ်သို့မဟုတ် retro ဂိမ်းများကိုကစားရန်ခွင့်ပြုသည်။ သေချာတာပေါ့၊ အဲဒီသဘောအရလမ်းကမလွယ်ကူခဲ့ဘူး။ ရနှေးငှေ့ မိမိအနှင့်အတူ SteamOS Operating System ရောက်ရှိလာခြင်းနှင့်အောင်မြင်ခြင်းသည်မပြီးဆုံးသေးပါ၊ အနည်းဆုံး၎င်းသည်ဂိမ်းအသစ်နှင့်အဟောင်းမျိုးစုံကိုကစားနိုင်မည့်လမ်းကြောင်းကိုညွှန်ပြသည်။ GNU / Linux ။ သို့သော်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်းပြောကြလိမ့်မည် "ChimeraOS".
ပြီးတော့ဘာကြောင့် ChimeraOS? ကောင်းပြီဒါကဘာဖြစ်လဲ Arch ကိုအခြေခံထားသော GNU / Linux distro ကို Steam နှင့်ပေါင်းစပ်ထားသည်၊ ကမ်းလှမ်းချက်တစ်ခု စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ရွေးချယ်စရာ သူတို့ရဲ့အိပ်မက်တွေတကယ်ဖြစ်လာတာကိုဘယ်လောက်မြင်နိုင်လဲဆိုတာ Gamers များစွာစူးစမ်းလေ့လာဖို့
GNU / Linux Distro သို့မသွားမီပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်သည် «ChimeraOS»ငါတို့တန်ဖိုးရှိတဲ့ငါတို့လက်ထဲပြန်လာလိမ့်မယ် ကစားရန်အကောင်းဆုံး GNU / Linux Distros များစာရင်းကျွန်ုပ်တို့၏ယခင်ဆက်စပ်ပို့စ်တွင်တစ်ခါထုတ်ဝေဖူးသော“သင်၏ GNU / Linux ကို Distro Gamer အဖြစ်ပြောင်းလဲပါ«။ ဤဖြန့်ဖြူးမှုများသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဂိမ်းကစားခြင်းအတွေ့အကြုံကိုပေးအပ်ရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ဖန်တီးထားသည်။ ဤအရာတို့တွင်အောက်ပါတို့ပါဝင်သည်။
Ubuntu GamePack ဖြစ်သည်
SparkyLinux ၅.၃ GameOver
Manjaro ဂိမ်း Edition ကို
ဂိမ်း Drift Linux
မှတ်စု: တစ်ခုချင်းစီသည်၎င်း၏အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကွဲပြားသည်၊ ထို့ကြောင့်တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်အကြံပြုခြင်းသည်လူတစ် ဦး စီ၏ကိုယ်ပိုင်အရသာပေါ်များစွာမူတည်လိမ့်မည်။ အလွန်ကောင်းသောအရာတစ်ခုသည်ရပ်ဆိုင်းပြီးဖြစ်သည် Linux ကိုဖွင့်ပါမရ။ အထူးဖော်ပြချက်ရှိသည် လက္ကာ ၎င်းသည် microcomputers အမျိုးအစားတွင်တပ်ဆင်ရန်အလွန်ကောင်းသော Distro ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည် Raspberry Pia မှာဆွေးနွေးခဲ့သလို၊ DesdeLinux ၌ယခင်ဆောင်းပါး
သင်၏ GNU / Linux ကို Distro Gamer အဖြစ်ပြောင်းလဲပါ
1 ChimeraOS: GNU / Linux + Steam Big Picture
1.1 ChimeraOS ဆိုတာဘာလဲ။
ChimeraOS: GNU / Linux + Steam Big Picture
၎င်း၏အတွက်၎င်း၏ Developer အရသိရသည် တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်အောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြထားသည် -
"Steam Big Picture ကိုအခြေခံထားတဲ့ကွန်ပျူတာဂိမ်းတွေအတွက် Operating System တစ်ခု ဆိုလိုသည်မှာကွန်ပျူတာဂိမ်းကစားခြင်းကိုအကွက်ကျကျပံ့ပိုးပေးသော Operating System တစ်ခုဖြစ်သည်။ တပ်ဆင်ပြီးနောက်၊ ၎င်းသည် Steam Big Picture သို့တိုက်ရိုက်စတင်သည်၊ ထို့ကြောင့်မည်သူ့ကိုမဆို Steam မှပံ့ပိုးပေးသောသူတို့၏ခေတ်ပြိုင် (သို့) retro ကစားနည်းကိုစတင်ကစားခွင့်ပြုသည်။"
"GamerOS တွင် SteamOS သည်နည်းပညာနှင့်မဆိုင်သောအကန့်အသတ်များကြောင့်ပုံတူပွားရန်မဖြစ်နိုင်ပေ။ ၎င်းသည်မည်သူမဆိုသင်ရရှိနိုင်သောအခြားဖွဲ့စည်းမှုများအပြင်ပိုမိုချောမွေ့ပြီးထိန်းသိမ်းမှုမပါသည့် console gaming အတွေ့အကြုံကိုခံစားရန်ခွင့်ပြုသည်။ GamerOS သည်သင်နှင့်ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာတွင်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်ကစားနည်းများကိုပျော်ရွှင်စေရန်ကူညီလိမ့်မည်။"
ယင်း၏အကြား ထူးခြားသောလက္ခဏာများ ကျနော်တို့ကအောက်ပါဖော်ပြနိုင်သည်
တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသောမိနစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်ကစားရန် operating system အသစ်ထဲသို့သင်စတင်ရန်ခွင့်ပြုသည်
မည်သည့်စက်မှမဆိုဂိမ်းများကို install လုပ်ပြီးစီမံရန်ပေါင်းစပ်ထားသော web application ကိုသုံးသောအစွမ်းထက် application တစ်ခုပေါ်တွင်အခြေခံသည်။
အနည်းဆုံးအနိမ့်ဆုံးကိုထည့်သွင်းပါကစားရန်လိုအပ်သောအရာကိုသာပေးသည်၊ အခြားအရာမရှိပါ။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်အသုံးပြုရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီးလိုက်ဖက်သောဂိမ်းများကိုပြင်ဆင်ရန်မလိုဘဲချက်ချင်းကစားနိုင်သည်။
အမြဲ up to date ဖြစ်နေသည်: နောက်ဆုံးပေါ် embedded drivers များနှင့် software များပါ ၀ င်သောပုံမှန်မွမ်းမံမှုများပါ ၀ င်သည်။ ထို့အပြင်ဤအပ်ဒိတ်များသည်အလိုအလျောက်ရောက်လာပြီးဂိမ်းကိုအနှောင့်အယှက်မပေးဘဲနောက်ခံ၌ပြေးသည်။
game controller များနှင့်အလွန်လိုက်ဖက်မှု: မည်သည့်ထိန်းချုပ်မှုကိုမဆိုသုံးခွင့်ပြုသောထိန်းချုပ်မှုများနှင့်အပြည့်အဝလိုက်ဖက်သော၎င်း၏ interface ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။ Steam, Epic Games Store, GOG နှင့်အခြား console ပလက်ဖောင်းများစွာမှ၎င်းတို့သည်မည်သည့်ဂိမ်းကိုမဆိုအလွယ်တကူကစားနိုင်ရန် Xbox, PlayStation နှင့် Steam controllers များနှင့်ကောင်းမွန်သောလိုက်ဖက်မှုကိုပေးသည်။
မသန်စွမ်း ပိုပြီး updated သတင်းအချက်အလက် အပေါ် "ChimeraOS" မင်းဆီကိုလည်ပတ်နိုင်တယ် GitHub တွင်တရားဝင်ဆိုဒ်အထူးသဖြင့်သူ့ ဝီကီ ​​/ အမေးအဖြေများ သူတို့ကသူ့ရဲ့ဇာစ်မြစ်နဲ့လည်ပတ်မှုအကြောင်းအရာတွေအများကြီးရှင်းပြတဲ့နေရာမှာ တိုက်ရိုက်ကြည့်ချင်ရင်အဲဒါကိုကြည့်ပါ ဂိမ်းများကိုအသိအမှတ်ပြုသည် ၎င်းတွင်ပြဿနာမရှိဘဲကစားရန်အောက်ပါတို့ကိုတိုက်ရိုက်စူးစမ်းနိုင်သည် link ကို.
တိုတိုပြောရရင် "ChimeraOS" ၎င်းသည်သင်မြင်နိုင်သည်နှင့်ပထမဆုံးအနေနှင့်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည် ရေနွေးငွေ့လည်ပတ်မှုစနစ်, ခေါ် "SteamOS" အဲဒါကငါတို့ကွန်ပျူတာတွေရဲ့ခုံတွေကိုအင်အားနဲ့မရောက်နိုင်သေးဘူး။ ပြီးတော့အခြားသူတွေအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ရွေးချယ်စရာတစ်ခု GNU / Linux Distros သည်အဆင့်မြင့် Gamers များအတွက်သင့်တော်သည် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်။ ခက်ခဲသောတပ်ဆင်မှုများ၊ ပြင်ဆင်မှုများနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည် ရေနွေးငွေ့ app ကို သူတို့ရဲ့ hip game တွေကိုကစားနိုင်ဖို့
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ဤစာအုပ်သည်တစ်ခုလုံးအတွက်အလွန်အသုံးဝင်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်ရရှိနိုင်သောလျှောက်လွှာများ၏ဂေဟစနစ်၏တိုးတက်မှု၊ ကြီးထွားမှုနှင့်ပျံ့နှံ့မှုတို့အတွက်များစွာအထောက်အကူပြုသည် «GNU/Linux»။ သင်၏အကြိုက်ဆုံးဝက်ဘ်ဆိုက်များ၊ လိုင်းများ၊ အုပ်စုများသို့မဟုတ်လူမှုကွန်ယက်များသို့မဟုတ်စာတိုပေးပို့ရေးစနစ်များတွင်အခြားသူများအား၎င်းကိုမျှဝေခြင်းကိုမရပ်တန့်ပါနှင့်။ နောက်ဆုံးကျွန်ုပ်တို့၏မူလစာမျက်နှာသို့သွားပါ «FromLinux» သတင်းများပိုမိုရှာဖွေရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တရားဝင်ချန်နယ်ဖြစ်သည် DesdeLinux မှကြေးနန်း.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » ဖြန့်ဝေ » ChimeraOS: Steam နှင့်ကွန်ပျူတာဂိမ်းများအတွက်စံပြ GNU / Linux Distro
Paul Cormier ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Red Hat, Inc. ဟုသူကပြောသည်
အလွန်ကောင်းသောဆောင်းပါး။ ငါတို့ကဒီ operating system ကိုစမ်းသပ်ဖို့လိုလိမ့်မယ်။ ငါကများသောအားဖြင့် Fedora fan တစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့်ရွေးစရာများများရှိလေပိုကောင်းလေ
Paul Cormier ၏ CEO Red Hat, Inc.
မင်္ဂလာပါပေါလု မင်းရဲ့ထင်မြင်ချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ဟုတ်တယ်၊ စံပြကကွန်ပျူတာမှာဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုကြည့်ဖို့ကြိုးစားတာ။
AutoKey: GNU / Linux အတွက်အသုံးဝင်သော task automation tool
ငလျင်၊ GNU / Linux တွင် QuakeSpasm နှင့် FPS Quake1 ကိုဘယ်လိုကစားမလဲ။